June 2017 – Trend.com.mm
အွန်လိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်တွေ အခမဲ့ ကြည့်နိုင်မယ့် နေရာ ၆ ခု
Posted on June 30, 2017 by Linn Ko Ko Htet
Netflix , Amazon Prime တို့လို အခပေး ကြည့်ရှုရတဲ့ အွန်လိုင်း ရုပ်ရှင် ၀န်ဆောင်မှုတွေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on အွန်လိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်တွေ အခမဲ့ ကြည့်နိုင်မယ့် နေရာ ၆ ခု
Chevrolet ရဲ့ Trailblazer 2017
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ကားမိတ်ဆက်အဖြစ် Chevrolet ရဲ့ Trailblazer 2017 နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အကြမ်းပတမ်းခံနိုင်မှု၊ ကားအပြင်ပိုင်းတောင့်တင်းခိုင်မာမှုတွေကြောင့် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on Chevrolet ရဲ့ Trailblazer 2017
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်လဲ ?
Posted on June 30, 2017 by Wint
တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းဆိုတာ စိတ်ပြောင်းလဲလွယ်သလို သစ္စာဖောက်ပြီး သင့်ကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သူငယ်ချင်းအမည်ခံ စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုပြောတာပါ။ သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာရဖို့တကယ်ခက်ပါတယ်။နေရာအသစ်ရောက်တဲ့အခါ စိတ်တူ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်လဲ ?
ဟယ်ရီစတိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Dunkirk ရုပ်ရှင်ကား ဇူလိုင် ၂၁ ရက် စပြမယ်
ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတိုဖာနိုလန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Dunkirk ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဇူလိုင်က ၂၁ ရက်နေ့မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on ဟယ်ရီစတိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Dunkirk ရုပ်ရှင်ကား ဇူလိုင် ၂၁ ရက် စပြမယ်
မြန်မာမုန့်ချစ်သူတွေအတွက် အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ တင့်တင့်
Posted on June 30, 2017 August 9, 2017 by Pyone Thinzar Yi
ခေတ်မှီတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်ပိုင်ရိုးရာအစားအသောက်တွေလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာမုန့်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ တချို့မုန့်လေးတွေလည်း ဝယ်စားဖို့ ခက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မစားရတာကြာတော့လည်း » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on မြန်မာမုန့်ချစ်သူတွေအတွက် အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ တင့်တင့်
တော်လှန်ရေးသမား – တင်ထွေး (မြန်မာပြန်) (စာအုပ်အညွှန်း)
အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ စာရေးဆရာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Khwaja Ahmad Abbas ရဲ့ INQUILAB ၀တ္ထုကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on တော်လှန်ရေးသမား – တင်ထွေး (မြန်မာပြန်) (စာအုပ်အညွှန်း)
တစ်ပတ်အတွင်းကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ရုပ်ရှင်ကားများ (၃၀.၆.၂၀၁၇ မှ ၆.၇.၂၀၁၇ အထိ)
ကပ္ပိယ ……………. Mingalar Cineplex.ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်) – ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၁၊ ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၂ သမ္မတ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on တစ်ပတ်အတွင်းကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ရုပ်ရှင်ကားများ (၃၀.၆.၂၀၁၇ မှ ၆.၇.၂၀၁၇ အထိ)
ထောင်ဒဏ် ၁၀ လ ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ T.O.P
Posted on June 29, 2017 by Linn Ko Ko Htet
ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုအတွက် စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်လို့အပြီးမှာတော့ T.O.P ကို အစိုးရရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဆိုင်းငံ့ကာလ ၂ နှစ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၀ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on ထောင်ဒဏ် ၁၀ လ ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ T.O.P
ပရိသတ်တွေအတွက် အဒဲလ်ရဲ့ စာတစ်စောင်
အဒဲလ်ဟာ ၂၉နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ဂရမ်မီဆုတွေအများကြီးရထားတဲ့အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။အဒဲလ်က သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်မှာ သူမကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စာတစ်စောင်ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာမှာတော့ သူမက “၁၈လအတွင်း နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေပွဲ ၂၅ ခု » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on ပရိသတ်တွေအတွက် အဒဲလ်ရဲ့ စာတစ်စောင်
အယ်လ်ဘမ်သစ်မှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်မပါဘူးဆိုတဲ့ Exo
Posted on June 29, 2017 by Noel
မိန်းကလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲဖြစ်တဲ့ Exo အဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်ကိုဇူလိုင်လမှာ ဖြန့်ဝေမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆူဟို၊ချန်ယန်၊ဆီဟွန်၊ကိုင်၊ဒီအို၊ချန်း၊ဆီအွန်၊ဘတ်ချန်နဲ့ Lay ဆိုပြီးအဖွဲ့ဝင် ၈ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အခုအခွေအသစ်မှာတော့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lay » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on အယ်လ်ဘမ်သစ်မှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်မပါဘူးဆိုတဲ့ Exo